Thing တစ်လုံး လိုသလိုသုံး - Myanmar Network
Thing တစ်လုံး လိုသလိုသုံး
Posted by zar ni (My Way!) on November 5, 2011 at 13:09 in အင်္ဂလိပ်စာ သိကောင်းစရာ အဖြာဖြာ
အင်္ဂလိပ်တွေ၊ အမေရိကန်တွေဟာ သူတို့ပြောတဲ့စကားထဲမှာ Thing ကိုမကြာခဏသုံးလေ့ရှိပါတယ်။ အလျင်လိုနေတဲ့အခါမျိုးမှာ တိတိကျကျမရည်ညွှန်းချင်တဲ့အခါမျိုးမှာ “ဟိုဟာ။ ဒီဟာ။ ဟိုကိစ္စ။ ဒီကိစ္စ” ဆိုပြီးသုံးတတ်ပါတယ်။ Thing ရဲ့အသုံးလေးတွေသိထားတဲ့အခါမှာတော့ စကားလုံးအမှန်ရှာမရတဲ့အခါမျိုးမှာ ယာယီအစားထိုးသုံးစွဲနိုင်တာပေါ့။ စားပွဲပေါ်က အမျိုးအမည်မသိတဲ့ အရာတစ်ခုကို တောင်းချင်တဲ့အခါမျိုးမှာ “Can you pass me that thing, please?” ”အဲဒီဟာလေးလှမ်းပေးနိုင်မလားမသိဘူး” လို့ပြောတာအဆင်ပြေပါတယ်။တစ်ခုသတိထားရမှာက ဒီအသုံးအနှုန်းတွေဟာ informal လို့ခေါ်တဲ့ ရင်းရင်းနှီးနှီးပြောရတဲ့အခြေအနေမျိုးမှာသုံးတယ်ဆိုတာပါပဲ။ ကိုယ့်ရဲ့အထက်လူကြီး၊ သူစိမ်းတွေနဲ့ဆိုရင်တော့ ချင့်ချိန်သုံးစွဲတာကောင်းပါတယ်။
What do you think about the whole … thing? လူတစ်ယောက်ကို သူသိပြီးသား ရင်းနှီးပြီးသားကိစ္စတစ်ခုနဲ့ပတ်သက်ပြီး သူ့သဘောထားကိုမေးချင်တဲ့အခါ “အဲဒီ … ကိစ္စကိုဘယ်လိုသဘောရလဲ” မေးသလိုမျိုးမေးနိုင်ပါတယ်။ Thing ကိုအသုံးပြုခြင်းအားဖြင့် ကိုယ်ပြောချင်တာကို အသေးစိတ်ပြောစရာမလိုတော့ပါဘူး။ ဥပမာ What do you think about the whole promotion thing?” ဟို အရောင်းမြှင့်တင်ရေးကိစ္စကိုဘယ်လိုထင်လဲ။
This whole … thing looks really messed up (pretty bad etc.) အပေါ်ကနဲ့အတူတူပါပဲ။ Whold နဲ့ thing ကြားထဲမှာ ကိုယ်ပြောချင်တဲ့စကားညှပ်ထည့်သုံးသွားရုံပါပဲ။ “This whole bank bailout thing looks really messed up!” ဘဏ်ကငွေကြေးကူညီမယ့်ကိစ္စကြည့်ရတာတော်တော်ဆိုးရွားပုံပဲ။
The thing is that … အင်မတန်အသုံးလည်းဝင်၊ အသုံးလည်းများတဲ့စကားစုလေးပါ။
“ဒီလိုဗျ . . .” “ဒီကိစ္စက ဒီလိုရှိတယ်ဗျ . . .” လို့အဓိပ္ပါယ်ရပါတယ်။ ကိုယ့်ရဲ့ထင်မြင်ချက်ကိုရှင်းပြရာမှာစကားပလ္လင်ခံတဲ့အနေနဲ့သုံးကြပါတယ်။
Here’s the thing … “ကဲ. . . ဒီမှာကွာ . . . ဘယ်လိုလဲ” ပုံစံမျိုးနဲ့ ကိုယ်က တစ်ခုခုကမ်းလှမ်းဖို့၊ အကူအညီတောင်းဖို့ စကားစတာဖြစ်ပါတယ်။ “OK, here’s the thing – I can’t make it to 9:30 tomorrow morning, can you fill in for me?” “ကဲ. . ဒီမှာကွာ။ မနက်ဖြန် ကိုးနာရီခွဲ ငါရောက်အောင်မလာနိုင်ဘူး။ မင်းငါ့အစားဝင်ပေးမလား။ ဘယ်လိုလဲ”
How are things? သူငယ်ချင်းအချင်းချင်း ရင်းရင်းနှီးနှီးနှုတ်ဆက်လေ့ရှိတဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်ပါတယ်။ “အခြေအနေဘယ်လိုလဲဟေ့” လို့မေးပုံမျိုးကို Things are looking up ကိုယ့်ဘ၀ကိုကြေနပ်နေတယ်။ အရာရာအဆင်ပြေနေတယ် လို့ပြန်ဖြေနိုင်ပါတယ်။Things are pretty bad ဆိုရင်တော့ “အခြေအနေမဟန်ဘူးဗျို့”ပေါ့။
There’s one more thing ပြောစရာတစ်ခုကျန်သေးတယ်။
Do the right thing လုပ်သင့်လုပ်ထိုက်တာလုပ်သည်။
Sure thing သေချာတာပေါ့။ ကျိန်းသေပေါက် ဆိုတဲ့အဓိပ္ပါယ်နဲ့သုံးနိုင်ပါတယ်။ ဥပမာ သူငယ်ချင်းက ကိုယ့်ကိုယ် ဒီညအိမ်လာလည်မလား မေးတဲ့အခါ Sure thing လို့ပြန်ဖြေနိုင်သလို ကိုယ့်ကို ဘာသောက်မလဲလို့မေးတဲ့အခါ “Come on, don’t you know beer isasure thing for me?” “လုပ်မနေစမ်းပါနဲ့ကွာ။ ငါဘီယာကြိုက်တာမင်းမသိဘူးလား” လို့ပြန်ပြောနိုင်ပါတယ်။
The real thing ပစ္စည်းအစစ်အမှန်။ ကိုယ့်အကြိုက်။ လမ်းပေါ်မှာအဖိုးတန်ကားလှလှလေးတွေ့လိုက်တဲ့အခါ “Yeah, that’s the real thing!” လို့အားကျတဲ့လေသံနဲ့ပြောနိုင်ပါတယ်။
Sort of thing အကြောင်းအရာ။ ကိစ္စ။ “I’m not into that sort of thing” “ ဒီလိုကိစ္စမျိုးတွေကျွန်တော် သိပ်စိတ်မပါဘူးဗျာ”။ “That’s the sort of thing I like!” “ဒါမျိုးမှကျွန်တော့်အကြိုက်ပုံစံပဲ”
Nicest thing အကောင်းဆုံးအရာ။ “That’s the nicest thing anyone has ever said to me!” “လူတွေကျွန်မကိုပြောသမျှထဲမှာ ဒါအကာင်းဆုံးအရာပါ။” ဆိုသလိုမျိုး မိန်းကလေးတွေအသုံးများကြပါတယ်။
The next big thing သိပ္ပံနဲ့နည်းပညာမှာအပြောင်းအလဲတစ်ခုခု၊ ထူးခြားတဲ့တိုးတက်မှုတစ်ခုခု အကြောင်းပြောရာမှာသုံးပါတယ်။ “Did you know cloud computing is the next big thing?”
It’sathing of the past အတိတ်မှာကျန်ခဲ့ပြီ။ ဘိုးတော်ဘုရားခေတ်က ဟာကြီး။
“Analogue phones are the thing of the past, and now it actually would be cool to own one!”
လူငယ်များဘ၀အောင်မြင်ရေးခရီးလမ်းအတွက် အင်္ဂလိပ်စာလက်နက်ကို ထက်မြက်အောင်သွေးနိုင်ကြပါစေ။
အင်ျဂလိပျတှေ၊ အမရေိကနျတှဟော သူတို့ပွောတဲ့စကားထဲမှာ Thing ကိုမကွာခဏသုံးလရှေိ့ပါတယျ။ အလငျြလိုနတေဲ့အခါမြိုးမှာ တိတိကကြမြရညျညှနျးခငျြတဲ့အခါမြိုးမှာ “ဟိုဟာ။ ဒီဟာ။ ဟိုကိစ်စ။ ဒီကိစ်စ” ဆိုပွီးသုံးတတျပါတယျ။ Thing ရဲ့အသုံးလေးတှသေိထားတဲ့အခါမှာတော့ စကားလုံးအမှနျရှာမရတဲ့အခါမြိုးမှာ ယာယီအစားထိုးသုံးစှဲနိုငျတာပေါ့။ စားပှဲပျေါက အမြိုးအမညျမသိတဲ့ အရာတဈခုကို တောငျးခငျြတဲ့အခါမြိုးမှာ “Can you pass me that thing, please?” ”အဲဒီဟာလေးလှမျးပေးနိုငျမလားမသိဘူး” လို့ပွောတာအဆငျပွပေါတယျ။တဈခုသတိထားရမှာက ဒီအသုံးအနှုနျးတှဟော informal လို့ချေါတဲ့ ရငျးရငျးနှီးနှီးပွောရတဲ့အခွအေနမြေိုးမှာသုံးတယျဆိုတာပါပဲ။ ကိုယျ့ရဲ့အထကျလူကွီး၊ သူစိမျးတှနေဲ့ဆိုရငျတော့ ခငျြ့ခြိနျသုံးစှဲတာကောငျးပါတယျ။
What do you think about the whole … thing? လူတဈယောကျကို သူသိပွီးသား ရငျးနှီးပွီးသားကိစ်စတဈခုနဲ့ပတျသကျပွီး သူ့သဘောထားကိုမေးခငျြတဲ့အခါ “အဲဒီ … ကိစ်စကိုဘယျလိုသဘောရလဲ” မေးသလိုမြိုးမေးနိုငျပါတယျ။ Thing ကိုအသုံးပွုခွငျးအားဖွငျ့ ကိုယျပွောခငျြတာကို အသေးစိတျပွောစရာမလိုတော့ပါဘူး။ ဥပမာ What do you think about the whole promotion thing?” ဟို အရောငျးမွှငျ့တငျရေးကိစ်စကိုဘယျလိုထငျလဲ။
This whole … thing looks really messed up (pretty bad etc.) အပျေါကနဲ့အတူတူပါပဲ။ Whold နဲ့ thing ကွားထဲမှာ ကိုယျပွောခငျြတဲ့စကားညှပျထညျ့သုံးသှားရုံပါပဲ။ “This whole bank bailout thing looks really messed up!” ဘဏျကငှကွေေးကူညီမယျ့ကိစ်စကွညျ့ရတာတျောတျောဆိုးရှားပုံပဲ။
The thing is that … အငျမတနျအသုံးလညျးဝငျ၊ အသုံးလညျးမြားတဲ့စကားစုလေးပါ။
“ဒီလိုဗြ . . .” “ဒီကိစ်စက ဒီလိုရှိတယျဗြ . . .” လို့အဓိပ်ပါယျရပါတယျ။ ကိုယျ့ရဲ့ထငျမွငျခကျြကိုရှငျးပွရာမှာစကားပလ်လငျခံတဲ့အနနေဲ့သုံးကွပါတယျ။
Here’s the thing … “ကဲ. . . ဒီမှာကှာ . . . ဘယျလိုလဲ” ပုံစံမြိုးနဲ့ ကိုယျက တဈခုခုကမျးလှမျးဖို့၊ အကူအညီတောငျးဖို့ စကားစတာဖွဈပါတယျ။ “OK, here’s the thing – I can’t make it to 9:30 tomorrow morning, can you fill in for me?” “ကဲ. . ဒီမှာကှာ။ မနကျဖွနျ ကိုးနာရီခှဲ ငါရောကျအောငျမလာနိုငျဘူး။ မငျးငါ့အစားဝငျပေးမလား။ ဘယျလိုလဲ”
How are things? သူငယျခငျြးအခငျြးခငျြး ရငျးရငျးနှီးနှီးနှုတျဆကျလရှေိ့တဲ့ပုံစံမြိုးဖွဈပါတယျ။ “အခွအေနဘေယျလိုလဲဟေ့” လို့မေးပုံမြိုးကို Things are looking up ကိုယျ့ဘဝကိုကွနေပျနတေယျ။ အရာရာအဆငျပွနေတေယျ လို့ပွနျဖွနေိုငျပါတယျ။Things are pretty bad ဆိုရငျတော့ “အခွအေနမေဟနျဘူးဗြို့”ပေါ့။
There’s one more thing ပွောစရာတဈခုကနျြသေးတယျ။
Do the right thing လုပျသငျ့လုပျထိုကျတာလုပျသညျ။
Sure thing သခြောတာပေါ့။ ကြိနျးသပေေါကျ ဆိုတဲ့အဓိပ်ပါယျနဲ့သုံးနိုငျပါတယျ။ ဥပမာ သူငယျခငျြးက ကိုယျ့ကိုယျ ဒီညအိမျလာလညျမလား မေးတဲ့အခါ Sure thing လို့ပွနျဖွနေိုငျသလို ကိုယျ့ကို ဘာသောကျမလဲလို့မေးတဲ့အခါ “Come on, don’t you know beer isasure thing for me?” “လုပျမနစေမျးပါနဲ့ကှာ။ ငါဘီယာကွိုကျတာမငျးမသိဘူးလား” လို့ပွနျပွောနိုငျပါတယျ။
The real thing ပစ်စညျးအစဈအမှနျ။ ကိုယျ့အကွိုကျ။ လမျးပျေါမှာအဖိုးတနျကားလှလှလေးတှလေို့ကျတဲ့အခါ “Yeah, that’s the real thing!” လို့အားကတြဲ့လသေံနဲ့ပွောနိုငျပါတယျ။
Sort of thing အကွောငျးအရာ။ ကိစ်စ။ “I’m not into that sort of thing” “ ဒီလိုကိစ်စမြိုးတှကြှေနျတျော သိပျစိတျမပါဘူးဗြာ”။ “That’s the sort of thing I like!” “ဒါမြိုးမှကြှနျတေျာ့အကွိုကျပုံစံပဲ”
Nicest thing အကောငျးဆုံးအရာ။ “That’s the nicest thing anyone has ever said to me!” “လူတှကြှေနျမကိုပွောသမြှထဲမှာ ဒါအကာငျးဆုံးအရာပါ။” ဆိုသလိုမြိုး မိနျးကလေးတှအေသုံးမြားကွပါတယျ။
The next big thing သိပ်ပံနဲ့နညျးပညာမှာအပွောငျးအလဲတဈခုခု၊ ထူးခွားတဲ့တိုးတကျမှုတဈခုခု အကွောငျးပွောရာမှာသုံးပါတယျ။ “Did you know cloud computing is the next big thing?”
It’sathing of the past အတိတျမှာကနျြခဲ့ပွီ။ ဘိုးတျောဘုရားခတျေက ဟာကွီး။
လူငယျမြားဘဝအောငျမွငျရေးခရီးလမျးအတှကျ အင်ျဂလိပျစာလကျနကျကို ထကျမွကျအောငျသှေးနိုငျကွပါစေ။
75 members like this
Permalink Reply by smilelay on November 10, 2011 at 13:04
Permalink Reply by အာကာမင်းမင်း on November 10, 2011 at 16:01
Thanks , Zar Ni. I think it isagood thing to know that kind of thing...:P
Permalink Reply by Zwe' Thihaa Kyaw on November 10, 2011 at 22:45
Thank you Sayar ^_^
Permalink Reply by kaungmyatthu000@gmail.com on November 12, 2011 at 15:02
Thank you so much for your explanation.Please ,send me another mails concerning with English speaking.
Permalink Reply by 0ld6u7gnlg8te on November 15, 2011 at 16:52
thank you ! that 's the nicest thing.
Permalink Reply by 3n8vaqeuqzomz on November 28, 2011 at 11:45
Permalink Reply by ma lay nge on December 13, 2011 at 11:19
Permalink Reply by Zaw Win on April 10, 2012 at 9:26
It is really kind of you. Every Myanmar can learn your sharing.
That is noble minded. May you be happy, healthy and wealthy in Happy Myanmar New Year!
Permalink Reply by 1e8fpx3my8n0x on May 16, 2012 at 17:01
Thanks Ko Zar NI...
Permalink Reply by Ko Thant Rasu on May 8, 2013 at 19:17
Permalink Reply by Aong Rine Sone on November 17, 2015 at 17:26
It´savery useful thing. Thanksamillion!
Permalink Reply by Nang Aye Aye Maw on November 17, 2015 at 18:19